OGEYSIIS MUHIIM AH: Tallaabooyin taageero loogu talagalay shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha sababtuna tahay Covid-19 dillaacay | HelpRefugeesWork
Haddii xaaladdaada caafimaad ay kuu baahato inaad gurigaaga joogto ilaalinta , haddii aad u baahan tahay inaad daryeesho carruurtaada hadda oo iskoolada ay xiran yihiin ama haddii aad leedahay ama aad ka shaqeysid shirkad saameyn ku leh talaaboyinka coronavirus, fadlan si taxaddar leh u aqri.
Waxaad naga soo wici kartaa 22205959, nagala soo xiriir viber / waxa app 97767329 ee cinwaanka e-maylka ah noogu soo dir info@helprefugeework.org si aad u hesho macluumaad iyo caawimaad dheeraad ah.
kalmada jirrada ee gaarka
1: Waa kuwee Ka-faa'iideystayaasha Gunnada Jirrada Gaarka ah?
Qaab dhismeedka tallaabooyinka taageerada degdegga ah, kaalmada jirrada ee gaarka ah waxaa la siin doonaa:
(i) Shaqaalaha leh dhibaatooyin caafimaad oo gaar ah oo lagu daro Liistada ay daabacday Wasaaradda Caafimaadka, oo ay tahay inay ka maqnaadaan shaqada ujeeddadooda ilaalinta caafimaadkooda oo aan u sii xumayn. Shuruudaha gudbinta shahaadada dhakhtarkooda shaqsiyadeed waa mid la isticmaali karo.
(ii) Ka maqnaanshaha khasabka ah shaqada shaqaaluhu ku qasbay ama ku amreen masuuliyiinta (Nooca 1 [xakamaynta khasabka ah ee kormeerka caafimaadka (karantiil)] iyo Nooca 2 [is xakameyn hoos timaada ilaalada taleefanka]), lasiiyay shaqaalahan inay haystaan ​​shahaadada ay soo saartay Wasaaradda Caafimaadka.
(iii) Dadka da'doodu u dhaxayso 63 - 65, ee aan qaadan hawlgabka sharciga ee sii wada shaqada oo ku dhaca Heerarka 1 iyo 2 ee Tilmaanta Wasaaradda Caafimaadka ee ku saabsan kooxaha nugul, waa haddii shaqaalaha xakamaynta haystaan ​​ ​​shahaado ay bixisay Wasaaradda Caafimaadka.
2: Shaqaalaha iskood u shaqeystaa ma xaq u leeyihiin faaidada jirrada?
Dadka iskood u shaqaysta waxay xaq u leeyihiin faaidooyinka jirrada ee gaarka ah haddii ay fuliyaan shuruudaha kor ku xusan. Waxaa la ogsoon yahay in ujeeddooyinka loogu talagalay in la sii taageero, waxaa la siin doonaa macaashka, sidoo kale shaqaalaha mushaarka qaata, ilaa maalinta afaraad ee maqnaanshaha.
3: Muddo intee le'eg ayaa xaq u yeelanaysa kaalmada jirrada gaarka ah?
Fasaxa jirada gaarka ah waxaa labixin doonaa maalmaha codsaduhu uqalmo sida shaqaale udhaxeeya qaybaha ka-faa'iideystayaasha, oo kala ah: (a) shaqaale leh dhibaatooyin caafimaad oo gaar ah, (b) ka maqnaansho qasab ah shaqada, iyo (c) shaqsiyaad da'da 63 illaa 65. Muddada kalmada jirrada waxay dhammaataa Abriil 30th, 2020.
4: Nidaamyada isku midka ah ee Adeegyada abniga Bulshada ma loo adeegsan doonaa bixinta kalmada jirrooyinka gaarka ah?
Wasaaradda Shaqada, Daryeelka iyo Caymiska Bulshada ayaa raaci doona habraacyo sahlan oo ku saabsan bixinta kaalmooyinka jirada gaarka ah ee loogu talagalay shaqaalaha qaba dhibaatooyinka daryeelka caafimaad ee gaarka ah, maqnaashaha khasabka ah ee shaqada iyo dadka ka weyn 65 sano. Kaalmada jirrada ee gaarka ah waxaa la siin doonaa dhammaan ka-faa'iideystayaasha, shaqaalaha iyo iskiis u shaqeystaha illaa maalinta afraad ee maqnaanshaha.
5: Miyay tahay in maalmaha maqnaanshaha lagu caddeeyo shahadada dhakhtarka?
Shahaadada dhakhtarku waa inuu cadeeyaa sababaha caafimaad ee loogu maqnaado in lagu daro liiska shaacinta ee Wasaaradda Caafimaadka ee ku saabsan in la siiyo fasaxa bukaanka kooxaha nugul ee laga helay websaydhka: www.pio.gov/coronavirus. Muddada ka maqnaashada shaqada ujeeddooyinka fasaxa bukaanka waa in lagu muujiyaa arjiga.
Fasax gaar ah
6: Waa maxay “Fasaxa Gaarka ah”?
“Fasaxa Gaarka ah” wuxuu quseeyaa waalidiinta ka shaqeeya qeybta gaarka loo leeyahay iyo kuwa guud waxaana la siiyaa xannaanada carruurta illaa 15 sano jir ah (illaa fasalka saddexaad ee jimicsiga) iyo sababta oo ah joojinta imaanshaha schoolka , mid dadweyne iyo mid gaar ahaaneedba, oo ay ku jiraan xanaanada.
Waxaa la ogsoon yahay in waalidiinta dadka naafada ah, ee ka madax bannaan da'dooda, ay xaq u leeyihiin fasax gaar ah haddii aan la ogolaan kaalmada daryeelka ilmaha. Muddada fasaxa gaarka ah waxaa loo qaddarin doonaa sidii xilli caymis u dhigma.
7: Mudo intee la,eg ayay ku maqanaan "Fasaxa Gaarka ah" iyo boqolkiiba meeqa mushaarka ay ku quseeyo?
“Fasaxa Gaarka ah” wuxuu hadda sii socon karaa ilaa 4 toddobaad mana ku darno ciidaha dadweynaha. Waxaa la siin doonaa waalid leh mushahar bille ah oo gaaraya ilaa 2,500 € (guud ahaan) sida soo socota:
Lacagta ugu horeysa ee 1.000-ee waalidka, gunnada “fasax qaas ah” waxaa lagu bixin doonaa 60% mushaharka iyo kan xiga ee 1.000 $ mushaarka isaga/ iyada 40% ayaa la ogolaan doonaa. Waxaa la ogsoon yahay in marka la eego qoysaska waalidiinta kelida ah saamiga bixinta faa iidada shaqaalaha mushaharka u dhigma ay yihiin 70% iyo 50% siday u kala horreeyaan.
Muddada daboolida gunnada “gaarka ah” waxay ku egtahay 30ka Abriil, 2020.
8: Waa maxay shuruudaha lagu bixiyo “Fasaxa Gaarka ah”?
“Fasaxa Gaarka ah” waxaa la siiyaa waalid leh mushahar bille ah oo gaaraya ilaa 2,500 € (guud ahaan). Waalid leh mushaar ka badan € 2,500 (guud ahaan) xaq uma leh "Fasaxa Gaarka ah".
“Fasaxa Gaarka ah” waxaa la siinayaa mid ka mid ah labada waalid, haddii hal waalid uu helo fasaxa la sheegay, kan kale ma heli karo fasax isku mid ah waqti isku mid ah. Sidoo kale, haddii hal waalid ka shaqeeyo / qaato gunno shaqo la aan / uu ka qeyb qaato Qorshaha Shaqo ka joojinta halka kan kalena uusan xaq u laheyn, waalidka shaqeynaya xaq uma lahan wa hadii asaga/ iyada waalidka aan shaqeynin uu sameyay fayraska . ama isbitaal la dhigo ama waa naafo, ama qof karantiil qasab ah.
Waxaa lagu nuuxnuuxsaday in fasaxa la sheegay la bixin doono haddii nooca shaqada shaqaaluhu aysan u oggolaanayn wargaarsiin ama ku shaqeyso guriga ama ay u oggolaato la shaqeynta saacado shaqo oo rogrogmi kara iyo haddii uusan jirin gargaar gudaha ah. "Fasaxa Gaarka ah" waxaa la siin doonaa iyada oo lala tashanayo loo shaqeeyaha markii la codsado shaqaalaha
9: Loo shaqeeyuhu ma bixin doonaa / kordhin doonaa inta hartay gunnada fasaxa khaaska ah?
Fasaxa khaaska ah wuxuu siiyaa waalidka mushahar gaaraya ilaa 2,500 (wadarta guud) sida soo socota: 1.000 ee ugu horeysa ee mushaarka waalidku wuxuu helayaa 'fasax qaas ah' oo ah 60% mushaharka ayaa la siinayaa iyo kan ku xiga € 1.000 ka mid asaga/ iyada gunnada 40% ayaa la bixin doonaa. Marka laga hadlayo qoysaska waalidka kelida ah, heerka lacagta waxtarka ayaa kordhay 70% iyo 50% siday u kala horreeyaan.
Loo shaqeeyuhu ma bixin doono / wax kale o qadarka. Waxaa la ogsoon yahay inay shaqaaluhu xaq u leeyihiin inay adeegsadaan fasaxa sannadlaha ah.
10: Waqtiga fasaxa qaaska ah miyay tahay inuu sii socdo?
Fasaxa qaaska ah waxaa la bixin doonaa ilaa 4 toddobaad waana la heli karaa si isdaba joog ah ama qeyb ahaan, kadib wada tashi lala yeesho loo shaqeeyaha. Waalidku waa inuu si gooni gooni ah u dalbadaa xilli kasta oo isagu ama iyadu rajaynayan inay helan fasax qaas ah
11: Ma u adeegsan karaa fasaxa gaarka ah ee xaaska / waalidka xagga kooxda nugul?( sida xaas uur leh)
Fasax gaar ah waxa lo ogolyahay oo keliya daryeelka carruurta ilaa 15 sano ah. Xaaladda carruurta naafada ah, fasax qaas ah ayaa la siiyaa iyada oo aan loo eegayn da'da ilmaha.
Si kastaba ha noqotee, haddii aysan jirin daryeel loogu talagalay waalid / xaaska mid ka mid ah kooxaha nugul sida ay qeexday Wasaaradda Caafimaadka, codsi waa la gudbin karaa kaas oo dib loogu eegi doono iyadoo lagu saleynayo astaamaha u gaarka ah. Nidaam la mid ah ayaa lagu dabaqi doonaa kiisaska haddii sayga / seyga xaaskiisa ay uur leeyahay
12: Fasaxa gaarka ah miyaa lo ogolyahay oo keliya shaqaalaha waqtiga buuxa?
shaqalaha waqti-dhiman iyo sidoo kale shaqaalaha wareega waxay xaq u leeyihiin fasax gaar ah. Intaa waxa u dheer, shaqaalaha ka shaqeeya waaxda khaaska ah iyo qaybta guud ee dawladda (oo ay ku jiraan shaqaalaha ururada dawladda-hoose) waxay xaq u leeyihiin fasax gaar ah. wana la caddeeyay, hase yeeshe, in dadka iskood u shaqeystaa aysan xaq u lahayn.
Qorshaha Cayrinta Shaqada
13: Waa maxay Qorshaha Shaqo ka Joojinta ?
Shirkadahaas in hakinta howlahooda waxaa go’aamiyay Digreeto Wasiir iyo shirkadaha ka sii shaqeynaya oo ay la soo deristay hoos u dhac in ka badan 25%, Qorshe Shaqo ka Joojin ayaa loo dejiyay si looga fogaado dib u dhaca iyo in isla waqtiga la siyaa shaqaalaha ay saamaysay waxay helayaan macaashka shaqo la'aantu ilaa inta ay shirkadu joojiso hawlaheeda ganacsi
Si qorshaha ganacsigu u hakiyo, waxaa lagama maarmaan ah in shirkadu ay u soo gudbiso codsi Wasaaradda Shaqada, Daryeelka iyo Caymiska Bulshada, ayagoo sheegaya shuruudaha iyo xalada ka qeybgalka Qorshahan. Shirkadaha sameeya wax dib-u-dhigis ma awoodi doonaan inay ka shaqeeyaan qorshaha.
14: Xubnaha cusub ee la shaqaaleysiinayo ee aan u qalmin shuruudaha ceymiska ma heli doonaan macaashka shaqo la'aanta Qorshaha Ceyrinta?
Maya, kiisaskaasi uma qalmaan faa,iidoyinka shaqo la, aanta. Dadka ay dhibaatadu saameysey waxay soo gudbin karaan codsi, kaasoo lagu baarayo kiis kiis, iyadoo ku saleysan astaamaha gaarka ah ee kiis kasta.
15: Sidee loo yareyn karaa 25% soo rogidda la cadeeye?
Shahaadada caadiga ah waxaa soo gudbin doona hanti-dhowrka la xaqiijiyay ee shirkadda, ka dib markay darsaan xogta ku saabsan muddadii sannadka hore oo ku saleysan dhammaan xogta la heli karo ee ku saabsan heerka ay khuseyso iyo nooca dhaqdhaqaaqa ganacsi, ee caddayn doona qiyaasta iyo / ama isbeddelka jira hoos udhaca muddada udhaxeysa bilaha Maarso iyo Abriil 2020. Haddii ay dhacdo in shirkaduhu aysan firfircoonayn muddadii u dhiganta tii sanadkii hore, isbarbardhiggu wuxuu ku saleysnaan doonaa bilaha hore.
16: Waxaan ka shaqeeyaa shirkad lagu xukumay xanibada khasabka ah (machadka xanaanada tababarka gaarka ah). Ma ka qeyb qadan karaa Qorshaha Cayrinta?
Qorshaha Cayrinta Shaqada ayaa loo heli karaa labada shirkadood ee lagu soo rogi karo xannibaadda khasabka ah sida ku xusan awaamiirta Wasiirka Caafimaadka ee lagu dhajiyay www.pio.gov.cy/coronavirus, iyo sidoo kale meheradaha laga qaadi doono hoos u dhac weyn . (in kabadan 25%), oo aan hoos imaan howlaha dhaqaale ee ku taxan Go'aannada la xiriira ee Wasiirka Caafimaadka.
17: Ganacsiyada ka qeyb qaadanaya Qorshooyinka Shaqo ka joojinta iyo shaqaaleysiinta dhalashada waddan seddexaad ama shaqaale xilliyeed, shaqaalahan ma xaq u leeyihiin manfac shaqo la'aan?
Muwaadiniinta seddexaad ee dalka iyo shaqaalaha xilliyeed ayaa xaq u leh gunnooyinka, haddii ay haystaan ​​deganaansho ku habboon iyo rukhsad shaqo oo ku taal Jamhuuriyadda Cyprus ayna buuxiyaan shuruudaha caymiska.
18: Wax kharash ah oo kiro ah ma laga bixin doonaa shirkadaha ku jira xayiraad khasabka ah?
Qorshaha Cayrintu wuxuu daboolayaa mushaharka shaqaalaha mana aha wax kharash ah oo ku baxa hawlgalka. Ma ahan, ma daboosho kirooyinka.
19: qabkee loo raci donaa ogolanshiyaha kor ku xusan?
Wasaaradda Shaqada, Daryeelka iyo Amniga Bulshada ayaa ku dhawaaqi dono maalmaha soo socda howsha dalabka, kaas oo loo sameyn doono qaab elektiroonig ah oo macquul ah, iyadoo hadafku yahay sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah. Codsiyada waxaa loo gudbin doonaa qaab elektiroonig ah.
20:Miyay kordhin doontaa muddada gunnada shaqo la aanta xalada degdegga ah awgeed?
Tallaabooyinka ayaa la qaadayaa illaa 30ka Abril 2020. Tallaabooyinka waa lala socon doonaa, haddii loo baahdana dib-u-eegis lagu sameeyo.
21: Miyey jiraan qiyaas lagu kordhinayo bixinta tabarucaada (hadda / waqtigii la dhaafay) Sanduuqa Ceymiska Bulshada?
Ma jiro wax cabir ah oo lagu kordhiyo bixinta khidmadaha
22:Ma jiraan halbeeg lagu taageerayo shaqaalaha iskood u shaqaysta?
Wasaaradda Shaqada, Daryeelka iyo Caymiska Bulshada ayaa tixgalinayo qaabab lagu taageero dadka iskood u shaqeysta ee ku dhaca qeybo ka mid ah dhaqdhaqyada qaarkood. Ogeysiisyada ayaa la heli doonaa waqti gaaban.
23: Goorma ayaa la gaarayaa taariikhda loo gudbinayo diidmada (daqliga dhabta ah) ee Adeegyada abniga Bulshada ee shaqaalaha iskood u shaqeeya?
Waqtiga kama dambeysta ee soo gudbinta diidmada ee shaqaalaha iskood u shaqaysta ayaa la kordhiyey hal bil, i.e. illaa 30ka Abril 2020 (halkii 31ka Maarso 2020)
24: Sideen ku ogaadaa dhaqdhaqaaqyada dhaqaale ee sababi kara ka joojinta khasabka ah?
Hawlaha xayiraada khasabka ah waxaa lagu qeexay wareegtada uu soo saaray Wasiirka Caafimaadka ee ay quseyso, oo laga heli karo www.pio.gov.cy/coronavirus
25: Cabashooyinka loogu talagalay ku xadgudubka tallaabooyinka:
Iyada oo ku xidhan kiiska, muwaadiniintu waxay soo gudbin karaan cabashadooda sida soo socota: cabashooyinka la xiriira ku xadgudubka sharciga Wasiirka Caafimaadka waa in loo gudbiyaa booliska. cabashooyinka la xiriira ku xadgudubka xuquuqda shaqaalaha sida la shaaciyey waxaana lagu soo daray xirmada kaalmada degdegga ee kor ku xusan.
Waa in loo gudbiyaa Waaxda Xiriirka Shaqaalaha (Nicosia: 22803100/22803127, Limassol: 25819440/22819820, Larnaca: 24817800/24817801 iyo Paphos: 26822614/26826640, iwm) email: info@dlr.mlsi.gov.cy iyo the Unugga kormeerka (tel: 77778577 iyo emayl: aapostolou@dlr.mlsi.gov.cy)
Afeef: Turjumiddani waa mid aan rasmi ahayn, oo ay diyaarisay loo-shaqeeyeyaasha iyo Ururka Warshadaha (OEB) oo ujeeddadoodu tahay bixinta tusaha aasaasiga ah.